Sei varume vachifira mukati – Gango
Sei varume vachifira mukati
Ngatizvitaure sezvazviri negweta guru
Nhasi uno ndirikutaura nezvenyaya isingawanzotaurwa nezvayo, asi nyangwe isingawanzotaurwa nezvayo ruzhinji rwevanhurume venyika ino kusanganisira nevamwe vemudunhu remuAfrica vanoshungurudzwa nemadzimai avo.
Nyaya zhinji dzemhirizhonga idzi hadzomhangarwi kumapurisa nemhaka yekuti varume vanenge vachitya kudzikisirwa kana vakazivikanwa kuti vatongi vedzimhosva havawanzotori nyaya dzakadai senyaya dzakakosha.
Muongororo netsvakurudzo yakaitwa zvakaonekwa pavarume vatanhatu mumwechete wavo anenge anedambudziko rekusangana nemhirizhonga. Izvi zvinowanikwa pawebsite inonzi https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/society/2010/sep/05/men-victims-domestic-violence
Kazhinji muno muAfrica vanhu vazhinji havawanzomhangara nyaya dzemhirizhonga dzemudzimba dzinoitwa nemadzimai zvichikonzerwa nekuti tsika nemagariro edu anoburitsa kuti varume vaneushingi kupfuura vakadzi.
Munguva pfupi yakapfuura ndakasangana nemumwe murume wenyikaino anonzi Thomas uyo akaenda kunogara kunyika yeBritain mugore ra2008 mushure mokunge mudzimai ariiye akanga atanga kenda. Pavainge vachirimuno Thomas aive mupurisa aive nechinzvimbo chepamusoro uye mudzimai wake aive mukoti.
Mudzimai wake ndiye akatanga kuenda kuBritain mugore ra2002 ndokusvikowana basa pamwe nemvumo yokuva mugari wemuBritain. Panguva yaakazowana tsamba yekufambisa iyi mudzimai wake akabva atanga kunonotsa mafambiro emamwe matsamba ayo aizoita kuti murume wake atevere. Thomas anoti iye akabva aregedza basa mushure mazvo ndokutengesa hupfumi hwose hwaaiva nahwo kuti awane mari yekutenga tikiti rendege, izvi akazviita asina kumbozivisa mukadzi wake. Mushure mokusvika Britain mukadzi wake akaedza pose paaigona kuparadza matsamba aThomas kusvikira pakuda kuvharisa vhisa rake.
Achirondedzera nyaya yake, Thomas anoti mushure mechiitiko ichi akaudza hanzvadzi yake iyo yaigarawo muLondon kuti imutengere tikiti rekudzokera kunyika yake yechiberekerwa yeZimbabwe. Dzaingova shungu bedzi asi aisagona kudzokera nekuti matsamba ake ekufambisa ainge atorwa nemudzimai wake. Achirondedzera Thomas anoti maitiro emukadzi uyu ainge ashanduka.
“Zvairamba kutendeseka kuti mukadzi uyu ndiye mukadzi wandaive ndaroora kwemakore makumi maviri apfuura. Hanzvadzi yangu yakandiyambira kuti zvaisabatsira kuti ndidzokere kunyika yechiberekerwa sezvo ndainge ndisisina basa ikoko uye hupfumi hwose.
“Akatondiyambira kuti ndinotvsaga tsamba dzekugara munyika iyi kunzvimbo yeLiverpool uko ndakushanda ikozvino semuchengeti wevanhu vakuru. Handina kumbobvira ndadzoserwa pasipoti yangu nemukadzi uyu. Mwanasikana wangu akuita zvidzidzo zvepamusoro zvekuUniversity uye anopota achindishanyira ukuwo mudzimai wangu atove kutogara nemumwe murume.
Thomas ndiye akandikumbira kuti ndiburitse nyaya iyi nedonzvo rekuti chive chidzidzo kunevamwe varume, zita randashandisa ndiro zita rake rekuzvarwa naro.
Mumwe murume zvekare anonzi Edmore akaenda kuBritain nemudzimai wake uyo ainge ave nemakore gumi nemanomwe varoorana. Mukadzi akazotanga kumutuka pamberi pevana nehama dzake. Akatangazve kudhakwa zvakanyanya achienda kunzvimbo dzekutandarira achizodzoka kunze koedza. Pose paiitika izvi Edmore ndiye akanga atove mureri wevana. Edmore akazofunga zvokusiyana nemukadzi uyu, nekuti ainge asisagoni kurarama kaupenyu kekurohwa nekutukwa pamberi pevana pamwechete nevehukama.
Achitaura Edmore anoti chikonzero chakaita kuti asamudzorera apo aimurova aitya kusungwa akazorarama hupenyu hwekusungwa, “Mudzimai uyu akangoshanduka sekutamba, pataive kuZimbabwe aisava nehunhu hwakaipa kudai.”
William ndemumwe murume anogara kuCoventry uye akauya kuBritain mugore ra2001, mudzimai wake nemhuri vakatevera mugore ra2008. Mudzimai wake akazotanga kuita mhirizhonga nekufamba nenguva achitora mari yose inenge yatambirwa pamwe nekuita chipfeve.
William akasvika pakuenda kubasa anemavanga ekurohwa. Apo ainge achibvunzwa nevaanoshanda navo kuti chii chainge chatora nzvimbo aingotsenga tsenga mukanwa kusvikira mukuru wepabasa anyatsogara naye pasi achinyatso mubvunzisisa ndipo paakazomubuda pachena kuti ainge achishungurudzwa nemukadzi wake, akabva ayambirwa kuti atsvake rubatsiro kumakambani ayo anobatsira vanoshungurudzika muupenyu. Zvakambomunetsa kutambira kuti angave mumwe wevanhu vangapihwe rubatsiro rwakadai.
Ndakakurukura zvakare nemumwe murume aibva kunyika yekuGhana uyo ainge achishungurudzwa nemudzimai wake kwemakore anoita matanhatu, nerimwe zuva mukadzi wake aida kumupisa nechichisiso ndokubva amurova irinzira yekuzvidzivirira. Mushure mokunetsana uku mukadzi wake akabva achaya runhare kumapurisa murume uyu akabva asungwa.
George uyo anogara kuBirmingham anoti iye zuva raakasvika kunhandare yeGatwick nemudzimai wake nemhuri ndiro zuva rakapera hubaba hwake nekuti akatadza kugara nemukadzi aimurova zuva nezuva.
Masimba Mukichi akanyora bhuku rinonzi Highway Blues iro rinotaura nezvemhirizhonga inokonzerwa nemadzimai, munyori uyu akanyora mashoko ekutsigira nyaya ino mushure mokunge yabuda mupepanhawu achiti zvamanyora inongova nhanganyaya nekuti nyaya idzi dzanetsa muBritain.
Varume vazhinji vendudzi dzakasiyana siyana varikufira mumbereko.